Akụkọ - Chuangmei Intelligent sonyere na ngosipụta nke Global Trade Fair nke chazụta Ihe Mgbochi Ọrịa Na-egbochi Ọrịa
“Belt na Okporo .zọ”（Ndebiri: B&R）bụ mkpụkpu aha “na Silk Road Economic Belt” yana “21stgbọ mmiri Silk nke narị afọ nke 21”. Ma ọ bụ ebumnuche nke Onye isi ala China bụ Jinping Xi tụpụtara na Septemba na Ọktọba 2013.“Belt na Okporo .zọ” gafere na mpaghara Asia, Europe na Africa ma gụnye mba ma ọ bụ mpaghara 136 dịka ndị otu ya. Ọ dabere na amaokwu mba ofesi na ala ma were ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa n'oké osimiri dị ka ọnụ. Ọ ga-adabere n'ụzọ zuru ezu na usoro mmekọrịta nke mba abụọ dị n'etiti China na mba ndị metụtara ya nke ọma wee nweta nkwado site na nyiwe mmekọrịta mpaghara dị ugbu a ma dị irè iji zụlite mmekọrịta mmekọrịta akụ na ụba na mba n'akụkụ Belt na okporo ụzọ n'ụzọ siri ike ma wuo obodo nke Ebumnuche Ekekọrịta. ọdịnihu na okekọrịta ọrụ nke ejiri ntụkwasị obi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, njikọta akụ na ụba na nsonye ọdịbendị mara.
N'ihe banyere oria ojoo nke coronavirus na ụkọ ihe mgbochi ọrịa zuru ụwa ọnụ, China emepee ụzọ azụmahịa iji bupụ ngwa ngwa nchekwa onwe onye na ngwa ahụike na akụrụngwa maka mba ndị ọzọ n'ihi mmejuputa iwu nke “Belt na Okporo .zọ”.
Chuangmei Intelligent sonyere na ngosipụta nke Global Trade Fair nke chazụta Ihe Mgbochi Ọrịa Na-efe efe na nitrile / latex / PVC glove production line site na May 31, 2021 ruo Eprel 1, 2021.
N'oge ngosi a, ụlọ ọrụ anyị gosipụtara ngwa ọrụ imepụta ihe ọhụrụ nke nitrile glove na aka aka abụọ, yana ikike imepụta kwa ụbọchị nke 500,000; modular imewe, mmepụta ụlọ ọrụ, na-na saịtị nzukọ na ịgbado ọkụ, ngwa ngwa echichi oge; ọkụ ikuku mgbasa usoro, Nchekwa ike na nchekwa gburugburu ebe obibi. Ihe mkpuchi PU na usoro ịcha chlorine nwere ike izute ihe ikpeazụ achọrọ dị iche iche.Ngwaọrụ anyị na-emepụta glove dọtakwara ọtụtụ ndị ahịa, na-enwe olileanya iwulite usoro mmepụta glove na obodo ha.